ကျနော့်အမြင် (ဒါန) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Tank » ကျနော့်အမြင် (ဒါန)	8
- nicolus agral
Posted by nicolus agral on Jul 13, 2016 in Think Tank | 8 comments
ကျနော်က ဗုဒ္ဓဘာသာပါ ဒါပေမဲ့ အေသီးရစ်ဘက်ပိုယိမ်းမယ်တော့ထင်ပါတယ်
ဗုဒ္ဓဘညသာကို ကိုးကွယ်စရာဘာသာရေးဆိုတာထက် လိုက်နာကျင့်သုံရမည့် Life style တခုလို့မြင်ပါတယ်
သွားရမယ့် လမ်းစဉ်က ဒါန သီလ ဘာဝနာပေါ့
တပါးသူလိုအပ်နေတဲ့အရာကို ထိုသူအဆင်ပြေပါစေ ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့
အဲဒီမှာ အကြောင်း အကျိုးတရားကဝင်လာရော
လှူတမ်းရတဲ့ အကျိုးကြောင့် ဘလာဘလာဘလာပေါ့လေ
အလှူခံသူ x လှူဖွယ်ပစ္စည်း x စေတနာသဒ္ဒါတရား = အကျိုးပေး
လှူဖွယ်ပစ္စည်း စင်ကြယ်လေလေ အကျိုးပေးကောင်းလေလေ
တပါးသူလိုအပ်နေတဲ့အရာကို ထိုသူအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့ မှန်ကန်တဲ့စေတနာ နဲ့လှူတာများလား
About nicolus agral
nicolus agral has written 61 post in this Website..
Although I amapaladin , I work in the name of the common people.
View all posts by nicolus agral →	Blog
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရမယ့်ကုသိုလ်ကိုမျှော်ပြီး လှူတာတော်သေးတယ်။ လုံးဝမလှူတာ အဆိုးဆုံး။ မရှိလို့ မလှူတာက မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တအားချမ်းသာတဲ့ လူတွေ လုံးဝမလှူတာ ရှိတယ်။ သိပ်ပြီး သွေးအေးတယ်။ အဲဒါတွေ ပိုဆိုးသေး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .တပါးသူလိုအပ်နေတဲ့အရာကို ထိုသူအဆင်ပြေပါစေ ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့လှူ ပါတယ်
.ပြန်ရချင်ရနိုင်တဲ့ ကုသိုလ်ကိုမျှော်ပြီး ဘယ်တော့မှမလှူပါ
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်ကတော့ လှူတယ်ဆိုကတည်းက ယတိပြတ်လှူတယ်။ ကျောင်းကန်ဘုန်းကြီးတွေမှ မဟုတ်ဘူး။ အခြားသူ လိုအပ်နေတာကို ဖြည့်ဆည်းပေးတာလည်း အလှူမြောက်ပါတယ်။
kai says: နောက်ဆို.. ဘိန်းသမားကို.. ဘိန်းများများရှုလို့ရအောင်.. စေတနာ၃တန်ပြဌာန်းပြီး.. ဘိန်းလှူကြနော်..
ကလေးတွေကိုလည်း… ကာမသုခစောစောခံစားလို့ရအောင်… အပြာစာအုပ်တွေလှူ.. ကြားလား…
ယတိပြတ်လှူ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ကျတော်ပြောတာ အာ့နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ သူဂျီးက တခြားကို လွဲပြီးတွေးတယ်နော် တကယ်ပဲ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 181
nicolus agral says: need vs want
nicolus agral says: သဂျီးစုတ် need vs want ကိုစကားလာကပ်နေတယ်
maslow မှာတော့ sex ကို breathing, water, food တို့နဲ့ တတန်းတည်းထားသဗျ physiology need ဆိုပြီးတော့
မမချွိ says: အို။
အလှူခံသူလည်း မမြဲ ဆိုတာနဲ့ စိတ်မှာ ထားပြီး လုပ်ရမတဲ့။